Fakana an-keriny :: Voasambotra ireo naka an-keriny Karàna teny Soavimbahoaka • AoRaha
Fakana an-keriny Voasambotra ireo naka an-keriny Karàna teny Soavimbahoaka
Iray volana aty aoriana, voasambotra sy naiditra am-ponja eny Tsiafahy Andriambololona Harifetra na Ragodogodona sy Rakoto­arijaona Mamy Maraina na i Laks. Voalaza fa isan’ireo tompon’antoka tamin’ny fakàna an-keriny ilay Karàna antsoina hoe Navaze, teny Soavimabahoaka tamin’ny 13 desambra lasa teo izy ireo.
“Teny Ambohimangakely i Laks no voasambotra. Teny Ankadimbahoaka kosa no nisamborana an-dRagodogo­dona, tamin’ny alarobia lasa teo. Na efa votsotra aza io Karàna nalain’izy ireo an-ke­riny io dia tsy mitsahatra manangom-baovao izahay. Efa voatonontonona izy roa lahy tamin’ireo fakàna an-keriny, tamin’ny taona 2017 sy 2018. Tafatsoaka tamin’ny fifampitifirana nahery vaika tamin’ireo mpaka an-keriny sy ny polisy ary ny zandary teny Anosivavaka i Laks, tamin’ny taona 2018”, hoy ny lietnà-kolonely Ravelomanana Tahina, lehiben’ny sampana misahana ny heloka bevava an’ny Zandarimaria eny Fiadanana.
Ankoatra azy ireo dia ni­sambotra olona roa hafa ireo zandary misahana ny heloka bevava. Voalaza fa teo am-panomanana ny paikady hakàna an-keriny teratany vahiny indray izy ireo izao voasambotra izao. Natolotra ny Fitsarana tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo izy efatra ireo, ka samy naiditra am-ponja vonjimaika avokoa.
Nilaza ny jeneraly Andrian­janaka Njatoarisoa, kaomandin’ny Zandarimaria, fa “hijoro amin’ity taona ity ny borigady hisahana mano­kana ny fakàna an-keriny eny amin’ny Toby Ratsimandrava. Tafiditra ao anatin’ny vinan’ny zandarimaria io”, hoy izy.
Jono an-dranomasina :: Nodorana sy nalevina ilay trondro lehibe, fesotra
Tranga tany Antsirabe :: Ray voatondro ho namono ny zanany roalahy